Online Infographic Generators, Ngwaọrụ na nyiwe
The ụlọ ọrụ infographics na-agbawa ma ugbu a, anyị na-ahụ ụfọdụ ngwaọrụ ọhụrụ iji nyere aka. Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ infographics na-akwụ ụgwọ n'etiti $ 2k na $ 5k iji nyocha, mepụta ma kwalite ozi ama dị egwu.
Ngwaọrụ ndị a ga - eme ka mmepe nke ihe omuma gị dị oke ọnụ, dị mfe iji chepụta ma bipụta, ụfọdụ gụnyere usoro ịkọ akụkọ iji hụ ka esi kesasịa ma bulie akwụkwọ ozi gị. Offọdụ n'ime ha dị obere ka ị nwee ike ịnagide nsogbu ụfọdụ, mana ha niile dị mma.
Jiri Kpachara Anya
Nwere ike ịnọdụ ala na nchịkọta nke ọnụ ọgụgụ na-adọrọ mmasị ma na-anwa ịmịkọta ụyọkọ chaatị dị na infographic. Nke ahụ abụghị ihe infographic bụ maka, nke ahụ bụ ihe Excel bụ. Ihe omuma ihe omuma kwesiri inwe isi okwu nwere ihe mgbaru ọsọ doro anya na ihe ichoro iburu ma obu kọwaara ndi na ege gi nti. Ihe omuma ihe omuma na-ejegharị onye ọrụ site na akụkọ ka ha wee nwee ike idowe ma ghọta ozi ahụ. Ihe omuma ihe omuma gi gha agha na udiri udiri oku iji kee ya onu.
Easel.ly - mepụta ma kekọrịta echiche anya na ntanetị
IBM Ọtụtụ Anya - Nweta nghọta n'ime data gị. Kọọrọ gị ihe gị na onye ọ bụla masịrị gị. Gbanwee echiche n'etiti obodo nke puku kwuru puku. Ọ bụ otu n’ime ụlọ ọrụ ndị a kacha akwanyere ùgwù n’ụwa ewetara gị. Ma… ọ bụ 100% n'efu.
table - Jiri anya nke uche hụ ma kesaa data gị na nkeji. Maka n'efu.
Infogram - Anyị na ndị okike magburu onwe ha na-arụ ọrụ iji wetara gị ihe kachasị mma na gburugburu maka akwụkwọ ozi gị. Nanị were ihe ọ bụla masịrị gị iwulite nke gị.
Uche na Eserese - Mepụta ihe mmado na-emetụta anya, edemede & ihe ngosi. Ọbá akwụkwọ ha gụnyere ihe karịrị 3,000 ihe atụ sayensị na nhazi akwụkwọ ọrụ njikere.
Piktochart - Piktochart bụ otu ihe ntanetị n'ịntanetị mbụ iji kwadoro okike nke infographics. Ọhụụ ya bụ ikwe ka ndị na-abụghị ndị na-emepụta ihe / ndị mmemme mepụta infographics mmekọrịta iji kwalite ihe kpatara ha / akara ma kụziere ha ihe ọchị na itinye aka.
Ubochi - Venngage na - enyere gị aka ịmepụta ma bipụta ihe ngosi ọdịnala, tinye ndị na - ekiri gị, ma soro nsonaazụ gị. Venngage bu ihe omuma nke ichota akwukwo ihe omuma di ike nye ndi ahia na ndi nkwusa.
Visme bụ ngwa ọrụ ejiri rụọ ọrụ iji gosipụta ihe ngosi, infographics, ọkọlọtọ weebụ yana obere eserese. Ndị ọrụ Visme nwere ike ịmalite site na ndebiri nke ndebiri ọkachamara ma ọ bụ bido na akwa akwa na-enweghị ike ma mepụta ọdịnaya ha, ahaziri nke ọma maka mkpa ha.
Pụrụ ọbụna ime Infographics si gị iOS ngwaọrụ ugbu a na Infographic Onye kere.
Ngosipụta: Anyị bụ ndị mmekọ nke ụfọdụ mmemme a ma na-ejikọ njikọ n'ime edemede a.
Tags: chepụta ihe infographicmfendị na-emepụta iheinfoactiveinfogramonye mmebe ihe omumainfographic generatoronye na-eme ihe omumainfographic ikpo okwundebiri ndebiriios infographic onye kereInfographics Ahịandị na-emepụta ntanetị n'ịntanetịpiktochartngwaọrụveningagevisme
Mee 28, 2012 na 12: 56 PM
Daalụ maka ndepụta ahụ. Nke a doro anya na ọ na-adị mfe ka ụwa mgbasa ozi na-agbanwe ngwa ngwa karịa ederede.
Mee 28, 2012 na 6: 55 PM
Kwere @valerie_keys: disqus! Hi were ndị otu ọfụma mara nke ọma na infographics nwere ike ọ gaghị erute ọtụtụ mmefu ego azụmaahịa. Ndị a bụ ụzọ dị mma iji zụlite nke gị ma na-akwụ ụgwọ ụgwọ!
Mee 28, 2012 na 7: 34 PM
Agụla ụfọdụ ihe mara mma ebe a.
Ikwesiri ịdebanye aha n'ezie maka nyochagharị. O juru m anya na ị nwaa ọtụtụ
tinye na-eme nke a ụdị nke magburu onwe ihe ọmụma na saịtị.
Sep 28, 2014 na 8:53 PM
Akwa dee Douglas na ekele maka ịlele Visme. Naanị ịgbakwunye, Visme gafere infographics; ọ mara mma nke ukwuu na-enye gị ohere ịmepụta
ụdị ọ bụla nke ọdịnaya anya gụnyere eserese na ngosi.